Dagaalka Hoose ee Sariirta iyo Nuuca Dhabar jabinta ,Wax ka baro | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada Dagaalka Hoose ee Sariirta iyo Nuuca Dhabar jabinta ,Wax ka baro
Dagaalka Hoose ee Sariirta iyo Nuuca Dhabar jabinta ,Wax ka baro
Bulsha:- Qaababkaan waxay hawshu ka socotaa dhanka gadaale oo waxa isku beegan wejiga ninka iyo dhabarka xaaskiisa. waxanay kala yihiin sidaan soo socota ee wax badan ka baro .
1- Kolka ay haweeneydu sariirta si dhabbacaad ah ugu dul seexato, shafkeeda iyo naaseheeduna ay sariirta dul saaran yihiin, ama ku sii beegan yihiin,
*Kolka wejiga, shafka, caloosha, iyo bowdooyinka haweeneydu ay taabanayaan sariirta, uu ninku si dherer ah ugu dul seexdo, isaga oo qaarkiisa dambe xoogaa soo laabayana uu labadeeda doolood dhammaadkooda geedka ka soo geliyo.
*Intay haweeneydu afarta ku istaagto iyada oo isku xajinaysa labadeeda jilib iyo labadeeda calaacal ama xusul, uu dabeeto ninkeedu gadaal kaga yimaado, oo dhabarka kaga dhaco.
Hadaba Ogow Qaabkaan si uur ku yimaadaa waa ay adag tahay, oo waxaba jirta in dadka aan uurka rabini ay isticmaalaan.
Haweenka aan aadka tababarka u qabini ma jecla qaabkaan mana ku raaxaystaan Waxa kale oo jirta in qaabkaani uu ku habboon yahay laba qof oo caato ah ama isneelo ah, 2- Kolka intay haweeneydu dhinaceeda bidix u seexato, uu ninku daba seexdo isagoo isna dhinaciisa bidix u jiifa sidaasina uu wajigiisu ugu sii jeedo jeegadeeda, geedkiisuna dabadeeda.
Dabeeto iyada oo ay lugteeda bidix dherersan tahay, tan midig ka laabto barta jilibka ah, yarahana hore u bixiso, sidaasina ninkeedu geedka ka soo geliyo daloolkii ay reebtay lugtii midig ee iyadoo laaban hore loo bixiyay, Waxaad ogaataa ayay iftineducation.com ku dhahayaan in aadan saacadan dareenkaaga badalin faa’iidayso uun ,Qaabkana waxa la isticmaalaa kolkay haweeneydu uur leedahay, iyo kolkay caafimaad darri ama tamar darri guud jirto hasa ahaatee Waxa xusid mudan in kolka qaabkaan la isticmaalayo ay gacanta midig ee ninku firaaqo tahay, oo uu siduu doono ugu istiimin karo xaaskiisa wanaagsan.
3- Kolka intay haweeneydu u istaagto sidii iyada oo fooraarta ama dhulka wax ka soo qaadanaysa, lugaha xoogaa kala fogeyso, iskuna tiiriso gambar ama sariir gaaban.
Qaabkaani waxa uu ku haboon yahay haweeneyda uurka leh, maadaama aanu khatar gelinaynin uurjiifka caloosheeda ku jira, dhakhaatiirta ayaana isticmaala kolkay baarayaan gidaarrada cambarka, iyo kolkay qalliin ku samaynayaan haweeneyda.
Reer iftineducation.com Hoyga Sirta Nolosha waxa ay ku leeyihiin hadii aad tahay nin xaas leh oo xaraanta aan rabin talooyin ayaa lagu haya oo aad u usticmaali karta xaaskaaga xiliga kulanka sariirta iyado aysan wax dhibaata ah soo gaareynin xaaskaga iyo adigaba .